राजधानीमा घर भएका सांसदले पनि छोडेनन् ‘घरभाडा’
दिनेश बिष्ट कैलाली चैत २०, २०७७
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढी तथा कैलालीभित्रै घर भएका केही सांसदले अझै पनि घरभाडा लिइरहेको पाइएको छ । यसरी राजधानीमै घर भएर पनि घरभाडा लिने सांसदहरूमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै तर्फका छन् । कैलाली क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचित नेकपाका सांसद वीरमान चौधरी, क्षेत्र नं. ५ को ‘क’ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद नेपालु चौधरी, नेकपाकै समानुपातिक सांसदहरू सुशीला बुढाथोकी, चुनकुमार चौधरी, राजपाकी समानुपातिक सांसद मालामती राना, डोटीबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले अझै पनि घर भाडा बापतको रकम बुझिरहेका छन् ।
कैलालीमा आफ्नो घर नभएको भन्दै महिनैपिच्छे घरभाडा बापतको रकम लिइरहेकामध्ये कैलाली क्षेत्र नं. ५ ‘ख’ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद डिल्लीराज पन्त, कांग्रेसकै समानुपातिक सांसद टेकबहादुर रैका, कैलाली क्षेत्र नं. ४ को ‘क’बाट निर्वाचित नेकपा सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीर्घ सोडारी, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्येश्वरी शाह र कञ्चनपुरबाट समानुपातिक सांसद बनेका कांग्रेस नेता देवराज पाठकले भने घरभाडा बापतको रकम बुझ्न छाडेका छन् ।
प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले चार महिनासम्म जानकारी नपाएर आफूले घरभाडा बापतको रकम बुझेको बताउँछन् । ‘जानकारी पाएपछि मैले बुझेको रकम पनि फिर्ता गरेँ । अहिले घरभाडा बापतको रकम बुझ्ने गरेको छैन,’ उनले भने । उनी अहिले पनि धनगढीमै घर रहेका केही सांसदले घरभाडा बुझ्ने गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘मैले नाम भन्न मिल्दैन । अधिकांशले अझै घरभाडा भनेर रकम बुझ्छन्, कसले हो आफैँ खोज्नुस् ।’ प्रदेश सभा सदस्य सुशीला बुढाथोकीले भने आफूहरूले घरभाडा बापतको रकम लिइरहेको स्वीकार गरेकी छन् । ‘फूलबारीमा घर छ । १५ किलोमिटरको दुरी होला,’ उनले भनिन्, ‘तर धनगढीमा मैले भाडामा कोठा लिएर बसेकी छु । केहीले विगतमा लिइरहेको रकम फिर्ता पनि गरे । तर, मेरो घर टाढा पनि पर्छ, मैले रकम लिइरहेकी छु ।’
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामबहादुर धामीले मापदण्डअनुसार सांसदहरूले घरभाडा रकम पाइरहेको बताए । ‘अन्य मापदण्ड त छैन । १५ किलोमिटर टाढा घर भएका सांसदहरूले घरभाडा रकम पाउने हो । त्योभित्र भएकाहरूले घरभाडा नपाउने भन्ने प्रावधान छ । १५ किलोमिटरबाहिर घर छ भनेर निवेदन दिनेहरूले घरभाडा रकम पाइरहेका छन्,’ उनको भनाइ छ । राजधानीमै घर भएर पनि घरभाडा लिने गरेका सांसदहरूले मापदण्डअनुसार नै रकम लिएको दाबी गर्ने गरेका छन् । १५ किलोमिटरबाहिर घर भएको हुनाले घरभाडा बापतको रकम लिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार सभामुख, उपसभामुख र केही सांसदबाहेक अधिकांश सांसदले घरभाडा बापतको रकम लिइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख र उपसभामुखले सरकारी आवास सुविधा पाएकाले घरभाडा नपाउने नियम छ । राजधानीमै घर भएका सांसदहरूलाई भने घरभाडा नदिने प्राब्धान छ । घरभाडाबापत विपक्षी दलका नेताले २० हजार रुपैयाँ, सत्तापक्षको प्रमुख सचेतक र सभापतिले १८ हजार रुपैयाँ, सत्तापक्षका सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकले १८ हजार रुपैयाँ र सांसदले १७ हजार रुपैयाँका दरले मासिक रकम पाउने प्राब्धान छ ।
त्यस्तै सांसदलाई फर्निचर खर्चबापत एकमुष्ट एक÷एक लाख दिने प्राब्धानअनुसार सबै सांसदले सो रकमसमेत लिइसकेको बताइएको छ । संसद् सचिवालयले ऐनबमोजिम सबै सांसदलाई घरभाडाको रकम उपलब्ध गराइएको सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीले बताए । ‘ऐनमा व्यवस्था भएअनुसारको रकम सबै सांसदले बुझ्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मेरो घर धनगढीमै छ, म लिन्नँ भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन ।’
संसद् सचिवालयका अनुसार नेकपाका प्रमुख सचेतकको मासिक पारिश्रमिक ५७ हजार ५ सय छ । सचेतकको ५७ हजार छ । र अन्य प्रदेश सभा सदस्यहरूले ५६ हजार ५ सय मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदीय दलको नेताको ५९ हजार ५ सय पारिश्रमिक तोकिएको छ । विभिन्न समितिका सभापतिहरूले मासिक रूपमा ५७ हजार ५ सय प्राप्त गर्छन् । मासिक पारिश्रमिकबापत सबैले सञ्चार खर्च ३ हजार, आवास सुविधाका नाममा १७/१८ हजार, बिजुली शीर्षकमा २ हजार, अतिथि सत्कारमा ७ हजारदेखि ८ हजार ५ सयसम्म प्राप्त गर्ने गरेका छन् ।